लुम्बिनी प्रदेशको मूख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी‘सोनाम’नियूक्त-यस्तोछ उनको राजनितिक इतिहास » Nepal Fusion	Nepal Fusion	लुम्बिनी प्रदेशको मूख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी‘सोनाम’नियूक्त-यस्तोछ उनको राजनितिक इतिहास » Nepal Fusion
लुम्बिनी प्रदेशको मूख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी‘सोनाम’नियूक्त-यस्तोछ उनको राजनितिक इतिहास
काठमाडौ २०७८ साउन २८ गते बिहिवार
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो मूख्यमन्त्रीको रुपमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ नियूक्त भएका छन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलको समर्थनमा केसीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन ।
प्रदेश सभाका कूल ८० सदस्यहरुमध्ये केसीको पक्षमा ४२ जना सांसदले गरेको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मूख्यमन्त्रीमा नियूक्त गरेका हुन । नवनियूक्त मूख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी रोल्पा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
विद्यार्थी राजनीति देखि भूमिगत युद्धसम्म
बि.सं २०२७ माघ १० गते रोल्पा नगरपालिका-६ ज्यूवाङमा कुलप्रसाद केसी बुवा टिकाराम के.सी. र आमा रजमता के.सी. कोखबाट जन्मिएका थिए। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराबाट प्रभावित भएर माद्यामिक विद्यालयमा पढ्दा नै राजनीतिमा जोडिए। उनी बि.स. २०४३ सालमा नेकपा मसालको विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भए। एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दाङ झरे । दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आईए पढ्दापढ्दै विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भई सक्रिय राजनीति गर्न थाले।
विद्यार्थी राजनीति बाट सुरु गरेको चार वर्षपछि २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता पाएका थिए। २०४६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिएका केसी २०४८ सालमा शिक्षक जागिर शुरु गरेपछि शिक्षक संगठनमा लागेर सक्रिय भए। २०४८ सालदेखि २०५० सालसम्म प्राथमिकतहको स्थायी शिक्षक भएका केसी शिक्षकको जागिर जोडेर माओवादी सशस्त्र युद्धमा भूमिगत भएका थिए। १० वर्षे जनयुद्धमा ६ जना दाजु भाई पुर्णकालिन नेता कार्यकर्ता हुन ।
विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय केसी शिक्षक भएपनि आफ्नो राजनीतिलाई निरन्तरता दिए। प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक भएका केसी पार्टीमा एरिया सेक्रेटरी भएर भूमिका निर्वाह गरे। २०५० साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्थायी शिक्षकले कालो झण्डा देखाएको भन्दै उनले शिक्षकबाट अवकास लिनु पर्‍यो। स्थायी शिक्षकले प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेको भन्दै शिक्षकबाट राजीनामा दिन परेपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा आए। शिक्षकबाट राजीनामा दिएपछि केसी तत्कालीन जनमोर्चामा सक्रिय भई भूमिगत राजनीति गर्न थाले।
२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’मा जाने घोषणा गरेपछि उनी भुमिगत भई माओवादीमा सक्रिय भए। माओवादी ‘जनयुद्ध’मा जाने बेला उनी रोल्पा जिल्ला पार्टी सदस्य मात्रै थिए। भूमिगत भई राजनीति गर्न थालेपछि उनको राजनीतिक उचाई थपिँदै गयो। २०५५ सालमा उनले दाङ, प्युठान र सल्यान जिल्लाको सेक्रेटरीको भूमिका पाए। त्यसपछि २०५६ साल भेरी-कर्णाली सैन्य कमिसार र २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए।
रोल्पामा जन्मिएका केसीले आफ्नो गृहजिल्ला मात्रै होइन सशस्त्र युद्धमा राप्ती क्षेत्रका चर्चित नेताको रुपमा परिचय बनाए। २०५६ सालपछि भेरी-कर्णाली क्षेत्रको सैन्य कमिसार बनेपछि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाए। २०६० सालमा उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज भएका थिए।
केसीले राजनीतिसँगै गीत संगीत र सहित्यमा समेत पहिचान बनाउन सफल थिए। ‘राजनीति गर्ने व्यक्तिले प्रायः राजनीतिलाई मात्रै ध्यान दिएको पाइन्छ। त्यो सोनाममा लागू थिएन। राजनीतिसँगै सैन्य र कला साहित्य, गीत संगीतमा पनि उत्तिकै निपूर्ण थिए।’ गीत संगीत र साहित्यमा समेत उत्तिकै सक्रिय भएकाले सशस्त्र युद्धमा संगठन विस्तार गर्नमा समेत निकै बल पुगेको नेताहरु बताउँछन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले पहिलोपटक रोल्पाको होलेरी आक्रमण गर्दा केसी समेत सहभागी भएका थिए। जुनसुकै पेशा वा क्षेत्रमा भएपनि केसीले राजनीतिलाई सधैं निरन्तरता दिएको पाइन्छ। ‘सोनाम विद्यार्थी हुँदा राजनीतिमा जोडिएका थिए। त्यसपछि रोल्पा लिवाङ स्थित बालकल्याण माविमा स्थायी शिक्षक हुदाको समयमा पनि जनमोर्चामा आवद्ध थिए’, ‘स्थायी शिक्षकबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिएर ‘जनयुद्ध’मा पूर्णकालीन रुपमा होमिएका थिए।’
‘जनयुद्ध’मा केसीको चर्चा चुलिँदै गएपछि उनी तत्कालीन सेनाको नजरमा पर्न थाले। त्यति नै बेला पार्टी बैठककालागि भारत जाने क्रममा भारतको पटना पुगेका बेला २०६० साल जेठ २० गते पक्राउ परे। त्यसपछि उनी २०६३ साल साउनसम्म झण्डै तीन वर्ष भारतको बक्सर जेलमा बन्दी जीवन बिताए। तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै केसी जेलबाट छुटेका थिए।
जेलबाट छुटेपछि २०६३ सालमा काभ्रेको कामीडाँडा बैठकबाट ‘जनमुक्ति सेना’को तेस्रो डिभिजन कमिसारको भूमिका पाए। जनमुक्ति सेनाका तेस्रो डिभिजन कमिसार भएका केसी सेना समायोजनका बेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तत्कालीन माओवादी ‘जनमुक्ति सेना’ क्यान्टोनमेटमा राखिएपछि वाईसीएलको इन्चार्जको भूमिका पाए।
लडाकू स्वभावका केसी एकीकृत पार्टीमा पोलिटब्यूरो सदस्यसँगै योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए। तत्कालीन माओवादीमा दुईलाइन संघर्ष भएपछि मोहन वैद्यतिर लागे। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै २०६९ सालमा वैद्यले नेकपा-माओवादी गठन गरेपछि मूल पार्टी एकीकृत माओवादी छोडे।
प्रचण्डको साथ छोडेका केसी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार अभियानमा लागे। वैद्यसँग झण्डै चार वर्ष बस्दा समेत केही हुन नसकेपछि केसी २०७३ सालमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ सगै माओवादीमै फर्किए। एमाले–माओवादी तालमेल गरेपछि केसी रोल्पा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भए। राजकिय भूमिकामा माओवादीमा सबैभन्दा कम अवसर पाउने नेतामा केसी पर्छन्।
तत्कालिन एमाले- माओवादी गठबन्धनमा एमालेबाट निर्बाचित शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा केसीले माओवादी कोटाबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। तत्कालीन नेकपामा केन्द्रीय सदस्य भएका केसी कानुन मन्त्रीकै जिम्मेवारी सम्हालेर दलको उपनेता समेत थिए। एमाले-माओवादी एकता भत्किएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनी मुख्यमन्त्रीको दौडमा लागेका थिए।
कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’